नेपाल मदर डट कम (www.NepalMother.com): अमेरिकाको क्यालिफोर्निया स्थित ओइकोस युनिर्भसिटीमा एक अपराधीले कक्षाकोठामा गोली हानेर सात जनाको ज्यान लियो !
अमेरिकाको क्यालिफोर्निया स्थित ओइकोस युनिर्भसिटीमा एक अपराधीले कक्षाकोठामा गोली हानेर सात जनाको ज्यान लियो !
अमेरिकाको क्यालिफोर्निया स्थित ओइकोस युनिर्भसिटीमा एक अपराधीले कक्षाकोठामा गोली हानेर सात जनाको ज्यान लिएकोछ । ४३ वर्षका वन गोह नामका पुरुषले मारेकामध्ये छ जनाको नाम सार्वजनिक भइसकेको छ। मारिने मध्ये ६ महिला र एक पुरुष हुन्। तीमध्ये ६ जनाको नाम सार्वजनिक भएको छ। तर घटनाको २४ घण्टा हुन लाग्दासम्म पनि मारिने नेपाली को हुन्, सार्वजनिक भइसकेको छैन।यी मध्ये सोनाम छोडेन र भुटिया छिरिङ नाम नेपाली हुनसक्ने अनुमान गरिए पनि अमेरिकी सञ्चारमाध्यममा आएका खबर अनुसार उनी नेपाली हैनन्। सोनाम तिब्बती हुन्। तिब्बती शरणार्थी शिविरमा उनको जन्म भएको हो र तिब्बतको प्रवासमा रहेको सरकारको शिक्षा विभागमा उनी काम गर्थे। घटना पछी हेलिकोप्टर बाट लिइएको भिडियो हेर्नुस
Posted by www.Nepalmother.com at 11:32 PM